Shell Casting Scale Elektronika Custom Cast - Minghe Casting
Fitaovana masinina / faritra elektronika
Ny refy mihantona elektronika dia misy fizarana telo: sensor, frame misy ary mpanaraha-maso fampisehoana mavesatra. Ny refin'ny elatra elektronika dia ampiasaina hampitana ny lanjan'ireo entana amin'ny fehikibo famindrana ho amin'ny fandraisana sy famindrana fampitana ny sensor manenjana. Izy io koa no rohy fiovam-po voalohany amin'ny dingam-pandanjana, satria io no singa manan-danja indrindra amin'ny ambaratonga fehikibo elektronika. Mpanamboatra fantsom-pako fanariana sy forging faritra ho an'ny tsena fivarotana Electronic Crane Scale Shell, OEM fiara, elektrika, fiara mifono vy, solika fampiharana malaza sy indostrialy. Misy ny fanariana ferrous sy tsy ferrous. Ny karazana famaohana dia misy ny fikorontanana, mafana mandeha ho azy, horonan-taratasy, fametrahana mazava tsara ary fampidiran-drivotra.
Shell vita amin'ny vy elektronika namboarina ho an'ny vokatra fanariana fanerena avo lenta
Fonon'ny vovon-drongony Die-casting fitaovana elektronika Frame
Die Casting Aluminium Alloy Electronic Equipment Face Frame
Boaty fitaovana elektronika tsy misy fanao maty
Cone White voaloko aluminium firaka fasika Casting trano elektronika
Square Cone nandoko aluminium firaka fasika Casting trano elektronika
Fahafatesana fanerena avo lenta amin'ny famonoana vatam-paty elektronika manokana